တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အဟုတ်တကယ်လေလာပြီ ... အသုပ်သယ် မေဓာဝီ
Posted by မေဓာဝီ at 1:35 PM
တို့လဲ လသာ ၂ ကဘဲ။
တို့လဲ အသုပ်ကြိုက်တယ် နဲနဲလောက်ကျွေးပါ။
ပန်းသီးသုပ်တစ်ခါမှ မစားဘူးဘူး ဒေါ်မေ့သမီးရယ်။ ရှိသမျှ အကုန်သုပ်တော့တာဘဲ။
ဆိုင်ဖွင့်လဲ ပိုက်ဆံမပေးပါဘူး နာမည်ပြောပြီးစားမှာဘဲ.တို့လေ တို့ပေါ့သိတယ်မဟုတ်လား မမကွန်လေး. မှတ်မိလား. ဘလော့ရေးတယ်လေ မေဓါဝီရေးတာလေးတွေ သိတ်ကြိုက်တာပေါ့ မှတ်မိတယ်မဟုတ်လား လာလာပြီးကွန်မက်ပေးတာလေ. ဟင်းဟငးဟင်း ဆိုပြီးနစ်ပွေဲလောက်ကတော့အသာလေးစားသွားမှာဘဲ မပေးပေါင်း.ပေးစရာလား ဟင်း. ။
9/03/2010 1:43 PM
အသုပ်သုံးပွဲပေးပါ တခါတည်း အ၀ဆွဲသွားပြီ ဗိုက်တောင်ဆာလာပြီ
အသုပ် စားတော့ခဏလေး လုပ်ရတာ ဗာဟီရ အရမ်းများတယ် ခဏခဏမသုပ်စားဖြစ်ပါ
အခုတော့ သခွပ်ပွင့်ခြောက်တွေ ကြောင်ရှာပွင့်ခြောက်တွေ ရှိသေးတာ သတိရလို့ သုပ်စားအုံးမှ
9/03/2010 2:09 PM
9/03/2010 2:26 PM
မေရေ... စားချင်စရာ အသုပ်တွေကြည့်ပြီး ထမင်းစားပြီးသားတောင် ဗိုက်ပြန်ဆာသွားသလိုပဲ...
အသုပ်သည်လုပ်တော့မယ်ဆို ပြောပါ မေ...
မမကွန်လိုပဲ လာမိတ်ဆက်ပြီး စားပါ့မယ်...
9/03/2010 2:32 PM
cooking apple ဆိုတာ မသိဘူးတော့...၊ စားကောင်းမှာပဲ..
ကောင်းကောင်းစားဖူးတဲ့ အောက်က နှစ်သုပ်တော့ လျှာရည်သိမ်းရင်း ကြည့်သွားပါတယ်.......။
စားကောင်းရင် မမေဓာဝီကို သတိရလိုက်မယ် နော်။
အသုပ်ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် လာအားပေးမယ် သိလား
စားချင်စရာ အသုပ်တွေကြည့်ပြီး ထမင်းစားပြီးသားတောင် ဗိုက်ပြန်ဆာသွားသလိုပဲ...
Agree ma thet wai's saying
9/03/2010 2:40 PM
ဒေါ်ကေ ဆိုလို့.. အမျိုးလား လို့..အမြန်ပြေးလာ ကြည့်တာ..။
ကျမတို့ ပြောလေ့ ရှိသလို.. ဆီချက်ရယ်..ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်ရယ်..ပဲမှုန့်ရယ်..သံပုရာသီးရယ်..ငံပြာရည် ရယ် ထိလိုက်တဲ့ အနံ့ လေး က..ဘာနဲ့ မှ မတူ.. တစ်သျှုး စက္ကု သုပ်စားတောင် အရသာ ရှိမှာလို့...း)
9/03/2010 2:51 PM
မခင်ဦးမေ ရေးထားတဲ့ ကော်မန့်ကို ဖတ်ပြီး
ရယ်ရတယ်၊ ကျနော် အခြေခံ ကျောင်းသား
ဘ၀က မုန့်ဈေးတန်းက မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်မှာ
၀ါသနာပါတယ်၊ မုန်လာဥသုပ်တော့ စမ်းကြည့်
9/03/2010 4:03 PM
ဒေါ်ကြီးမေရေ .. ကျနော့်ကို ပဲမှုန့်များများလေးနဲ့ ဆီချက်များများလေး ထည့်သုပ်ပေးပါ။
အသုပ်ဆိုရင် စိုရွှဲရွှဲ မကြိုက်ဘူးခင်ဗျ။
9/03/2010 4:15 PM
မုံလာဥနီ (Carrot - မန်းလေး အခေါ် ခါကြက်ဥ) ကိုလည်း ခြစ်ပြီးသုတ်စား...
အာလူး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပဲသီး၊ ရုံးပတေသီး (ကုလားဟင်းချက်တဲ့ သီးရွက်စုံ)ကို မန်ကျည်းမှည့်လေးနဲ့ ပြုတ် ပြီးမှ ဆီချက်၊ နှမ်း၊ မြေပဲထောင်းနဲ့ သုတ်စား...
ဒေါ်မေအသုတ်စုံ အစုံပလုံလာစားသွား ... အဲလေ လာငမ်းသွားပါတယ်။ အိမ်မှာလဲ မုန်လာဥဖြူသုတ်စားလေ့ရှိတယ်။ ပန်းသီးတော့ တစ်ခါမှ မသုတ်ဖူးဘူး။ စမ်းကြည့်ဦးမယ်။
အသုတ်တွေထဲကဆို အမေသုတ်ကျွေးတဲ့ မလွှပွင့်သုတ်လေးကို သတိရတယ်။
9/03/2010 5:16 PM
သံပုရာသီး..မြေပဲ..နံနံပင် ဆီ ကျက်..
9/03/2010 6:20 PM
စားတော့ စားချင်တယ်..မလုပ်တတ်တာက ခက်တယ်..
ငယ်ငယ်ကတော့ သုတ်ဖူးတယ် နှပ်ချေးကို တတောင်ဆစ်နဲ့ ရွှတ်ခနဲပဲ...
9/03/2010 9:32 PM
ပန်းသီးသုတ်တဲ့ စားချင်စရာလေး၊ တစ်ခါမှ မစားဖူးဘူး၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်က မရတော့ ဘာခြောက်မှုန့်ထည့်ရင်ကောင်းမလဲပဲ၊
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဆရာတော်ဦးဇောတိက တရားနာချင်တယ်ဆိုလို့ ဘယ်မှာရမလဲမေးတာ၊
ဘယ်မှာရှာရမယ်မသိတော့၊ မမေဓာဝီဘလော့လေးကိုပြေးလာတာ၊ Buddha FM လေး လင့်ပေးလိုက်တယ်၊ သူငယ်ချင်းက ကျေးဇူးတွေတင်လို့၊
Buddha FM လင့်လေးအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
9/03/2010 10:53 PM
နောက်ကြမှ ရောက်လာလို့ အသုတ် တွေ ကျန်ပါအုန်းမလားလို့ စိတ်ပူပူ နဲ့လာရတယ် မမေဓါ ရေ
ပန်းသီးသုတ် ကလေး အဝစားသွားတယ် နော်
9/04/2010 8:11 AM
အသုပ်အနေနဲ့ပဲ စားဖြစ်တယ် ...း))
ပန်းသီးသုတ် စားကြည့်ဦးမယ်၊ ပန်းသီးစိမ်းကို တို့စရာလုပ် စားဖူးတယ်၊ မေရေ မျှစ်အဝါ နုနုလေးတွေ ပြုတ်၊ သံပုရာသီးလေးနဲ့ ဆီချက် ပုဇွန်ခြောက်နဲ့ သုတ်စားကြည့် အရမ်းကောင်း၊ စကားမစပ် တို့ညီမလေးလည်း လသာ၂ ကပဲ...
9/04/2010 3:15 PM
အနော်တော့ မြင်းခွာရွက်သုပ်ပဲ စားဖူးတယ်......။
9/05/2010 1:29 AM
ဒီနေ့ပေါက် pauk မြင်းခွာရွက်သုပ်တယ်သိလား ဖဘ မှာ တင်ပေးထားတယ် အစ်မကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့။